Laparoscopy - a ... Laparoscopy e zabesifazane
Kaningi kunezimo lapho umuntu okudingeka ahlinzwe. A emashumini ambalwa eminyaka edlule, odokotela wasebenzisa laparotomy. Lapho efeza inqubo isiguli iqondiswa ubuthongo obukhulu nge izinzwa jikelele, okwathi ngemva kwalokho ezaziqoshwe besisu odongeni, imisipha, nezicubu. Ngokulandelayo, ukwenza manipulations ezidingekayo nezicubu sutured ngongqimba. Le ndlela kokungenela has bokwenza eziningi nemiphumela. Yingakho ukuthuthukiswa imithi akemi namanje.
Eminyakeni yamuva, cishe zonke isikhungo sokwelapha has zonke izimo ukuhlinzwa uyazonga ngaphezulu.
Lena indlela ukuhlinzwa noma uphethwe, ngemva kwalokho lo muntu kusheshe phindela isigqi ezivamile zokuphila bese ubuncane izinkinga manipulations.
Laparoscopy e zabesifazane
Ukusetshenziswa kwalesi zokukhwabanisa lithole impela eningi ukuthandwa. Uma udokotela akunakwenzeka ukwenza ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe esiguli, lolu hlobo inqubo kuyosiza kule. Laparoscopy e zabesifazane isetshenziswa ekwelapheni noma ukususwa izimila, ukwelapha ukungatholi abantwana kwabesifazane. Futhi, le ndlela kuyosisiza ukuqeda kakhulu ngokucophelela ukuvuvukala bese ususa i-endometriosis.
Ngaphezu uphethwe kanye nokwelashwa pathologies izifo zabesifazane engenziwa nenyongo laparoscopic sesinye, amathumbu, isisu kanye nezinye izitho. Kaningi, uma kusetshenziswa le ndlela Kwenziwa ukususwa uhlaka noma ingxenye yalo.
Laparoscopy - indlela ukulungiswa ukuthi ine izinkomba ngoba, njenganoma iyiphi enye ukuhlinzwa:
Namandla ukopha zangaphakathi.
Ukudabuka of uhlaka.
Female ukungazali ngaphandle kokuba isethwe izimbangela.
Izimila esibelethweni, kwesibeletho, noma ezinye izitho besisu.
Isidingo ukususa sigqoka noma amashubhu fallopian.
Ukuba khona ukuvuvukala, okuletha ukungakhululeki okuthile okukhulu ukuze indoda.
Ukwelashwa nokuvikelwa ukukhula komntwana ethunjini.
With ukuthuthukiswa endometriosis kanye nezinye izifo.
Kwezinye izimo, laparoscopy - akulona engcono impatho kukho futhi kudinga ukusetshenziswa laparotomy.
Laparoscopy akukaze kwenziwe kulezi zimo ezilandelayo:
Ephambi kwezinduna izigaba okunzima semithambo noma isifo senhliziyo.
Phakathi ukuhlala lomuntu equlekile.
Uma une abampofu igazi ekunqandeni.
Ukuze imikhuhlane noma assays ezimbi (ngaphandle ezimweni eziphuthumayo, asikubekezeleli ukubambezeleka).
ngaphambi kokuba sihlinzwe
Isiguli Kunconywa ukuba ucwaningo encane ngaphambi nje kokuba ahlinzwe. Zonke assays ayeshiwo umuntu kumele kuhambisane nemithetho, okuyinto esibhedlela. Laparoscopy kuhilela kuhlelwe ngaphambi kwalesi inhlolovo:
igazi ukuhlaziywa kanye cwaningo kwamakhemikhali wezindleko.
Ukunqunywa igazi ekunqandeni.
Kuphethe x-reyi futhi ECG cwaningo.
Uma kwenziwe ukuhlinzwa eziphuthumayo, udokotela kunomkhawulo ubuncane uhlu cwaningo, ezinye zazo yilezi:
Igazi yokuhlola iqembu futhi ekunqandeni.
imisebenzi Lohleliwe ngokuvamile esimisiwe isikhathi preprandial. Ngosuku olwandulela manipulation nesineke Kunconywa ukuthi ukhawule ukusetshenziswa ukudla kusihlwa. Futhi yenza isiguli i enema, okuyinto okuphindaphindiwe ekuseni ngaphambi kokuba sihlinzwe.
Ngosuku lapho manipulation wasabela isiguli Kwenqatshelwe yini ukuphuza futhi adle.
Njengoba laparoscopy - lena indlela emnene kakhulu ukuhlinzwa ke ngokuhamba yayo amathuluzi ukusetshenziswa micro kanye imbobo encane ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu kukhiqizwa.
Ukuze uqale, isiguli iqondiswa isimo ubuthongo. Izinzwa sinquma umthamo edingekayo izidakamizwa, ikhumbula ubulili, isisindo, ubude kanye nobudala isiguli. Lapho izinzwa isinyathelo, umuntu ixhunywe ngomshini. Lokhu kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi ngesikhathi ukusebenza zazingekho eziphuthumayo, kusukela kokungenela kwezitho besisu bavezwa.
Amade nesineke isisu ulele nge gas ekhethekile. Lokhu kuzosiza udokotela ngokukhululekile ukuhambisa amathuluzi ingaphakathi lesisu kanye akusho ukubamba udonga layo elingenhla.
Ngemva ukulungiswa nesineke usuphothuliwe, lo dokotela kwenza sebeziqhumbuza ambalwa komgodi ongaphakathi kwamathumbu. Uma nginesimila wenziwa laparoscopy, lo imbobo senziwa esiswini ephansi. Uma udinga ukuhlinzwa ukuze emathunjini, nenyongo sesinye nasesiswini, lo sebeziqhumbuza zenziwa endaweni indawo target.
Ngaphezu izimbobo ezincane amathuluzi, udokotela ohlinzayo kwenza omunye imbobo, okuyinto inkudlwana. Kuyadingeka ukwethulwa video. Ngokuvamile enze lokhu Imi ngenhla inkaba noma ngezansi.
Ngemva zonke amathuluzi athulwe udonga besisu futhi camcorder ixhunywe kahle, udokotela ubona esikrinini esikhulu izikhathi eziningana isithombe lakhulisiwe. Ukugxila kuso, afeze manipulations kudingekile emzimbeni womuntu.
Laparoscopy isikhawu kungaba isukela Imizuzu eyi-10 ngehora elilodwa.
Isimo emva kokuhlinzwa
Lapho beqeda manipulations udokotela kususa amathuluzi ezandleni ka ngalo ingaphakathi lesisu kanye kancane deflates, okuyinto kuphakamisa odongeni kwamathumbu. Ngemva kwalokho, isiguli kuletha ekuphileni ngaphakathi nangaphandle kwe-amadivaysi control.
Udokotela uhlola isimo ingqondo nendlela asabela ngayo lapho umuntu, bese ubeka nesineke esigcemeni nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa. Zonke ukunyakaza isiguli abazenzi ngokuqinile phezu sabakhubazekile ekhethekile ngosizo nabezokwelapha.
Esikhathini amahora ambalwa kuqala it is hhayi Kunconywa ukuba anikeze isiphuzo nesineke njengoba ukuhlanza zingaqala. Lapho umuntu uqala ukunyakaza kude izinzwa, ungakwazi mnike amanzi ethafeni semphinjeni komuntu.
Phakathi namahora angu-, kunconywa ukuthi siphakamise somzimba bese uyazama nokuhlala. Yima kungaba kuka kwamahora amahlanu ngemuva kokuhlinzwa usuphothuliwe. Izinyathelo zokuqala ngemva kokungenela kunconywa ukwenza ngosizo abanye, njengoba kukhona ingozi enkulu bokulahlekelwa ukwazi.
Extract isiguli wenziwa kwenkathi izinsuku ezinhlanu noma ngesonto emva kokuhlinzwa, inqobo inhlalakahle kanye Dynamics omuhle. Sutures isuswa imbobo ngemva kwezinsuku ezilinganiselwa amasonto amabili ngemuva kokungenela.
Yokutakula emva kokuhlinzwa
Uma babephathwa izimila ngemva simila laparoscopic noma isinqamu yalo ithunyelwa luhlolo histological. Kuphela ngemuva kokuthola imiphumela isiguli angabelwa ozolandela ukwelashwa.
Lapho ukhipha gallbladder noma kwenye ingxenye ye- luhlolo histological eyenziwa isidingo uphethwe olwengeziwe.
Uma ukusebenza wenziwa imizimba yabesifazane, ezikhiqiza amaqanda ngemuva laparoscopy badinge isikhathi sokuba "baphumule." Ukuze wenze lokhu, lo dokotela esabela amahomoni kunesidingo. Futhi, isiguli sikhombisa izidakamizwa ejwayelekile eqeda ukuvuvukala futhi elwa namagciwane.
Ngaphambi uzonikezwa ntandokazi ukusungulwa, okuyinto izobanjelwa laparoscopy, izindleko ukusebenza kanye nokulaliswa esibhedlela kufanele kubhekwe futhi wavumelana udokotela ukuba khona. Hlaziya ukusebenza nokugcinwa izindleko ezindaweni eziningana futhi ukukhetha okufanele.
Uma ukuhlinzwa siphuthuma ke, cishe, akekho ebuza izintandokazi futhi uzosizwa ezindaweni zokusiza ngezempilo zomphakathi. Kulokhu, ukubaluleka laparoscopy abuzange. Zonke manipulations abazenzi ebukhoneni umshwalense khulula.
Imiphumela kanye nezinkinga lokuhlinzwa
Ezimweni eziningi, laparoscopy kuba nomphumela omuhle empilweni yomuntu. Nokho, ngezinye izikhathi, kungase kuphakame yezinkinga enqubeni zokukhwabanisa, futhi ngemva kwaso.
Mhlawumbe inkinga eyinhloko kumiswa ukuvuvukala. Lena phetho ongenakugwenywa kokungenela kuhlinzwa. Kuthiwa ngesikhathi laparotomy, ukuthuthukiswa ukuvuvukala ngokushesha futhi evelele.
Enye inkinga ukuthi singenzeka ngesikhathi ukusebenza - kuyinto ukulimala kwezitho ezingaphakathi eduze iqondiswa ezandleni. Ngenxa yalokho, bangase baqale ukopha zangaphakathi. Yingakho ekupheleni manipulation udokotela uhlola ngalo ingaphakathi lesisu kanye izitho for umonakalo.
Ngemva kokuhlinzwa, isiguli Ungezwa ubuhlungu endaweni ingqwababa. Lokhu kuvamile ngokuphelele futhi Akuthathi isonto angaphezu kwelilodwa. ukungakhululeki ezinjalo ngenxa yokuthi "sihambahamba" ngomzimba sifuna igesi esidayisa futhi enza receptor futhi izinzwa izicubu.
Ungalokothi sokwesaba laparoscopy oluzayo. Kuyinto indlela emnene kakhulu sokwelashwa kuhlinzwa. Musa sigule futhi ube nempilo!
Izincomo amantombazane: indlela ukufaka Tampon kwesokudla?
Kungani silume izitho zangasese yowesifazane? Impendulo ochwepheshe
Cellar on emphemeni. Kuhhavini isitoreji imifino: Izibuyekezo
Paynberri Strawberry: incazelo, ukutshalwa, ukubuyekezwa
Nokwelashwa kwezinkinga corns
Kuyini irejista isimo izinhlangano microfinance